बेलका र बराहक्षेत्र जोड्ने कोशी पुल : आन्तरिक पर्यटकको ‘हब’ बन्दै - हाम्रो शब्द
बेलका र बराहक्षेत्र जोड्ने कोशी पुल : आन्तरिक पर्यटकको ‘हब’ बन्दै
उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका जोड्ने सप्तकोशी नदिको पुल बनेसँगै केही बर्षदेखि यस क्षेत्रमा घुम्न आन्तरिक तथा बाह्र पर्यटन आउन थालेको छन् ।
बराहक्षेत्र मन्दीर, प्राचीन हरिद्वार, चतरा जलविद्युत, औलियाबाबा मन्दीर साथै उदयपुरको मैनामैनी क्षेत्र, रङ्गमहल क्षेत्र, माहान्काली मन्दिर,प् यारागलाइडिङ, पानीबोट यहाको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको हो ।
सप्तकोशीको माछा, लोकल कुखुरा, स्थानीय उत्पादन गुन्द्रुक, सिस्नो यहाँको खाद्यान्नमा ब्रान्ड बनेको छ । यो क्षेत्र एक नम्बर प्रदेशकै धेरै घुम्न आउने ठाउँ बनेको बताउछ्न सप्तकोसी अन्डर हिल होटलका सन्चालक राज बान्तवाले !
सुबिधा सम्पन होटल हरियाली वातावरण, मनोरम दृश्य एकान्तनै कोशी पुल क्षेत्रको विशेषता रहेको छ । पूर्वको बिराटनगर, दमक ,बिर्तामोड, इटहरी, धरान सम्मका सयौँ सर्बसाधरण यस क्षेत्रमा घुम्न आउछन् । उनीहरुले रोजेको खाने चिज कोशीपुल क्षेत्रका होटलमै पाइने हुदा पर्यटकका लागि अझ सहजथा थपिएको चुलो रेस्ट्रोका संचालक नदि राईको तर्क छ ।
हिउदमा कोशी क्षेत्रमा पिकनिक खान सयौँको संख्यामा देशका विभिन्न ठाउबाट आउँने गरेको स्थानीयको भनाई छ । नेपालमै पहिलो पटक संचालित पानीजहाज चढ्न, हेर्न मात्रै दैनिक ५०० को हाराहारीमा आउने गरेको बताउछ पानीजहाज संचालक प्रेम राई ! विशेषत कोशी पुल क्षेत्र माछाकै लागि परिचित हुदैँ गएको छ । विभिन्न होटेलमा गरी १०० किलो भन्दा धेरै दैनिक माछा खपत हुने गरेको होटेल रङ्गमहलका संचालक मनिका राइले बताइन ।
ट्रेकिङ्का लागि पैदल यात्रा प्यारागलाइडिङ्को लागि बोप्ताङ् यहाँको नौलो विशेषता हो । केही समयदेखि कोरोनाको महामारीले गर्दा सुस्ताएको कोशीपुल क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको संख्या फेरी बढ्न थालेको छ । चैतदेखि घरमै बसिरहेको हुनाले घुम्नको लागि पहिलो रोजाइ कोशीपुल रहेको बताउँछन् बेलका नगरपालिका वार्ड नम्बर ८ का अध्यक्ष जयकुमार राई ।
यस क्षेत्रमा चहलपहल बढेसगैँ स्थानीय संस्था नेप्सेको संयोजनमा सरसफाइ कार्यक्रमसमेत गरिएको छ । खुला जमिन, प्रसश्त ठाउँसमेत भएको हुदा चतरा भन्दा कोशीपुल क्षेत्रमा होटल तथा विभिन्न संरचना खोलिएको हो । एक पटक कोशीपुलका होटलमा खाएपछि अर्को पटकसमेत आउँ– आउँ हुने गरेको बिराटनगरका युवा लभी साक्यले बताए ।
पुलमा आन्तरिक तथा बाह्र पर्यटन बढाउँन गुरुयोजनासमेत बनाइरहेको बेलका नगरपालिका स्तरिय पर्यटन समितिका अध्यक्ष रमण भट्टराईले जानकारी दिए ।
आयोजक ब्राजिललाई १–० ले पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाको सन्दार जित (फोटा सहित)